Ndị a bụ atụmatụ ọhụrụ nke Elementary OS | Site na Linux
Ndị a bụ atụmatụ ọhụrụ nke Elementary OS
Element 5.1.5 na-abịa na ọtụtụ nkwalite maka AppCenter na faịlụ, ma e nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga-achọpụta.
Banyere AppCenter, enwere mgbanwe dị ukwuu nke ọtụtụ ga-anabata; ndị ọrụ adịkwaghị mkpa ikikere nchịkwa iji wụnye mmelite.
Nke a nwere ike ịdị ka enweghị ntụkwasị obi, mana n'eziokwu ọ na-enwe ezi uche ma ọ bụrụ na anyị eche na onye njikwa otu kwesịrị ịnakwere ntinye nke ngwa maka ndị ọrụ nkịtị, yabụ na onye ọrụ nweburu ikike ahụ, yabụ hapụ ya ka ọ melite ngwa. ?
Nke a bụ ihe kpatara ya, na Onye Nlekọta Mmekọrịta Cassidy James Blaede na-akọwa:
"Ebe ọ bụ na onye nchịkwa ahụ kwadoro nwụnye ma anyị na-enye nkọwa doro anya n'etiti ngwa ndị a nwapụtara na ndị na-abụghị. Ọ baghị uru na anyị anaghị ekwe ka ndị ọrụ melite. Nke a bụ akụkụ nke ọrụ anyị na-aga n'ihu iji belata ike ọgwụgwụ nyocha, na-ewelite ikikere naanị mgbe ọ dị mkpa.".
Banyere ngwa faịlụ, mgbanwe dị ukwuu na-egbu; melite nkwụsi ike mgbe ị na-arụ ọrụ na ihe oyiyi. Malite na nhapụ a, ị nwere ike idetuo foto ma mado ya na ngwa dị iche na Elementary OS agaghịzịkwa etinye ụzọ mkpirisi nke ihe oyiyi ahụ mana ọ ga-abụ otu ya.
Ejirila obere ndozi ndị ọzọ emelitere ngwa ahụ dịka ozi ndị ọzọ nke na-enye ohere ijikwa faili ka mma.
Mgbanwe ndị ọzọ dịka idozi njehie mgbe a gbanwere ntọala ahụ dị na ụdị ọhụrụ a, Elementary OS 5.1.5, yabụ ihe niile kwesịrị ịgba ọsọ karịa nke mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ndị a bụ atụmatụ ọhụrụ nke Elementary OS
"Na-eme ka a otutu nke uche"
WTF! Onye sụgharịrị nke ahụ, Google ma ọ bụ gringo onye mụtara asụsụ Spanish n'okporo ámá Mexico? xDDD
Armando Mendoza placeholder oyiyi dijo
Zaghachi Armando Mendoza
Oscar Xiques dijo
Ha adighi etinye ochichiri dika odi. Ihe ndị ọrụ na-arịọ kemgbe ogologo oge ma ọ dị ka ha anaghị ege ha ntị.
Zaghachi Oscar Xiques
Stratis 2.1 bia jiri nkwado maka izo ya ezo site na iji LUKS2
GNU Linux-libre 5.7: kernel na-enweghị blobs adịlarị